Samsung Glaxy Ace တွင် Root လုပ်စရာမလိုပဲ မြန်မာဖောင့် ထည့်နည်း ~ နေမင်းမောင် ( နည်းပညာ )
Home » Andriod နှင့်ပါတ်သတ်သမျှ » Samsung Glaxy Ace တွင် Root လုပ်စရာမလိုပဲ မြန်မာဖောင့် ထည့်နည်း
Samsung Glaxy Ace တွင် Root လုပ်စရာမလိုပဲ မြန်မာဖောင့် ထည့်နည်း
By နေမင်းမောင်2:32 PM59 comments
ကျွန်တော် အခု Samsung Glaxy Ace မှာ Root လုပ်စရာ မလိုပဲ မြန်မာဖောင့် ထည့်တဲ့ နည်းလမ်းလေးကို ပြန်ပြီးတော့ ရှယ်ပေးသွားပါမယ် .. Myanmar Mobile Application Store မှာတော့ ပိုပြီးတော့ စုံပါတယ် .. ကျွန်တော် အဆင်ပြေတဲ့ နည်းလမ်းလေးကို ပြန်ပြီးတော့ တစ်ခြား အဆင်မပြေ သေးတဲ့ သူတွေ ရှိရင်လည်း အဆင်ပြေအောင် ပြန်ရေးပေးသွားပါမယ် .. အမှန်တကယ် လုပ်ကြည့်လိုက်ရင်တော့ အဆင့်တွေက အရမ်းမများပါဘူး .. ကျွန်တော် မသိသေးတဲ့ သူတွေ အခက်အခဲ ရှိမှာ စိုးလို့ တစ်ဆင့်ချင်း ရှင်းပြပေး ထားတဲ့ အတွက် .. ပုံတွေ အရမ်း များနေလို့ပါ .. တစ်ဆင့်ချင်းပဲ လိုက်လုပ် ကြည့်လိုက်ပါ .. အဆင်ပြေသွား ပါလ်ိမ့်မယ် ..
ကျွန်တော်တို့ မြန်မာဖောင့် သွင်းဖို့အတွက် အရင်ဆုံး အောက်မှာ တင်ပေးထားတဲ့ Myanmar Font ဆိုတဲ့ Folder လေးကို ဒေါင်းလော့ ချလိုက်ပါ .. Zawgyi_One.apk , Fontomizer_0.8.apk နဲ့ FrozenKeyboard_1.1.3.apk ဆိုပြီး Android Application သုံးခု တွေ့ရပါလိမ့်မယ် .. အဲ့ဒီကောင်လေးကို မိမိတို့ ဖုန်းရဲ့ SD CARD ထဲကို ထည့်လိုက်ပါ .. ပြီးသွားရင်တော့ ပထမဆုံး မြန်မာဖောင့်သွင်းဖို့အတွက် အပေါ်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ Application လေးတွေကို မိမိတို့ဖုန်းရဲ့ Android OS ထဲမှာ Install လုပ်လို့ ရဖို့အတွက် unknow sources ကိုသွားရွေးပေးထားဖို့လိုပါလိမ့်မယ် .. ဒါမှသာ Android Market ထဲက မဟုတ်တဲ့ Application တွေကို မိမိတို့ Android OS ထဲမှာ Install လုပ်လို့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ် .. အောက်က ပုံမှာ ပြထားသလို အဆင့်ဆင့် သွားပြီး လုပ်ပေးလိုက်ပါ ..
အရင်ဆုံး Setting ကိုသွားပါ ..
အောက်ကပုံမှာ ပြထားတဲ့အတိုင်း Unknow sources ကို အမှန်ခြစ်လေး ပေးလိုက်ပါ .. ဒါဆိုရင် မိမိတို့ Android OS ထဲမှာ Android Market ကမဟုတ်တဲ့ Application တွေကို Install လုပ်လို့ ရသွားပါလိမ့်မယ်..
အပေါ်က အဆင့်အတိုင်း ပြောင်းပြီး သွားပြီး ဆိုရင်တော့ Myanmar Font နဲ့ Keyboard ကို Install လုပ်ဖို့ အတွက် အောက်မှာ ပြထားတဲ့ အတိုင်း အဆင့်ဆင့် သွားလိုက်ပါ .. ပထမဆုံး My file ကိုသွားလိုက်ပါ ..
ပြီးရင် စောစောက SD Card ထဲကို ထည့်လိုက်တဲ့ Myanmar fonts ဆိုတဲ့ Folder လေးကို ဖွင့်လိုက်ပါ ..
အောက်ကပုံမှာ ပြထားတဲ့ အတိုင်း Application သုံးခု တွေ့ပါလိမ့်မယ် .. သုံးခုလုံးကို Install လုပ်လိုက်ပါ ..
ကျွန်တော် Zawgyi-One.apk ဆိုတဲ့ ကောင်လေးကို နမူနာ Install လုပ်ပြထားပါတယ် ..
အပေါ်က အဆင့်အတိုင်း Application သုံးခုလုံးကို Install လုပ်ပြီးသွားပြီ ဆိုရင်တော့ မြန်မာဖောင့် ရေးလို့ရဖို့နဲ့ ဖတ်လို့ရဖို့ အတွက် အောက်မှာ ပြထားတဲ့ အဆင့်လေးတွေ အတိုင်း လိုက်ပြင် ပေးလိုက်ပါ ..
အရင်ဆုံး မြန်မာလက်ကွက် ရိုက်လို့ရအောင် လုပ်ပါမယ် .. အောက်ကပုံမှာ ပြထားတဲ့ အတိုင်း Setting ကိုသွားလိုက်ပါ ..
အောက်ကပုံအတိုင်း FrozenKeyboard ကို အမှန်ခြစ်လေး ရွေးပေးလိုက်ပါ ..
ပြီးရင် နောက်တစ်အဆင့် FrozenKeyboard အပေါ်မှာ ရှိတဲ့ Select input method ကိုသွားလိုက်ပါ ..
ပြီးရင် အောက်က ပုံမှာ ပြထားတဲ့အတိုင်း FrozenKeyboard ကိုရွေးပေးလိုက်ပါ ..
အပေါ်က အဆင့်တွေ အတိုင်း ပြောင်းပေး ပြီးသွားပြီ ဆိုရင်တော့ မြန်မာ လက်ကွက်ကို အသုံးပြုလို့ ရသွားပါလိမ့်မယ် .. နောက်တစ်ဆင့် မြန်မာစာ ပေါ်အောင် အောက်က အဆင့်အတိုင်း သွားပြီး ပြောင်းပေး လိုက်ပါ ..
အရင်ဆုံး Setting ကိုသွားလိုက်ပါ ..
ပြီးရင် အောက်က ပုံမှာ ပြထားတဲ့ အတိုင်း Display ကိုသွားလိုက်ပါ ..
အောက်က ပုံအတိုင်း ပေါ်လာပြီ ဆိုရင်တော့ Zawgyi One TTF ကိုရွေးပေးလိုက်ပါ ..
ဒါဆိုရင်တော့ မိမိတို့ Android OS မှာ မြန်မာဖောင့်ကို ကောင်းကောင်း ရေးလို့ ဖတ်လို့ ရသွားပါလိမ့်မယ် ..
ဒီပို့စ်လေးကို PDF ဖြင့် လိုချင်တယ် ဆိုရင် အောက်မှာ ယူလိုက်ပါ ..
Download Mediafire ၊ Download Sharebest
အဲဒီနည်းက သိသလောက်ဆိုရင်တော့ samsung ဖုန်းတွေမှာဘဲရတာပါ.. android ဖုန်းတိုင်းမှာမရပါ..
ကျော်စွာ March 2, 2012 at 4:25 PM
ဟုတ်တယ်ဗျို့..sony မှာတော့ မရဘူး..samsung မှာတော့ ရမယ်ထင်တယ်..
ကျော်စွာ March 2, 2012 at 4:29 PM
sony ericsson w8 မှာရော root လုပ်စရာ မလိုပဲ မြန်မာစာ ဖောင့် ထည့်လို့ရပါသလား။ရှိရင် တင်ပေးပါလား အစ်ကို။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..
အင်..ကျွှန်တော် ..huawei မှာရော ရမလားသိဘူး.......
mr.high flyer March 2, 2012 at 5:34 PM
samsung andriod တမျိုးတည်းသာ Root လုပ်စ၇ာမလိုပဲမြန်မာဖောင့်၊ကီးဘုတ်ထည့်လို့ရတယ်..ကျန်andriod များမှာတော့root လုပ်ပေး၇ပါတယ်
ကျနော် samsung ,htc ,sony andriod အားလုံးစမ်းကြည့်ပီးပါပီ
mr.high flyer March 2, 2012 at 5:36 PM
Aung Moe March 3, 2012 at 3:50 PM
Black Berry Bold မှာရောရမလား...?
လွမ်းဝေ March 5, 2012 at 8:27 PM
အစ်ကိုတို့ရေ...acer liquid E S100 ကိုလဲ root လုပ်လို့ရမရလေး နဲ့ လုပ်နည်းလေးများသိထားကြရင် ကူညီပါဦးးး...
ုကိုနိုင် March 13, 2012 at 3:41 AM
အကိုပြောပြပြီးတင်ပြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ sony ericsson w705 ဖုန်းတွေမှာေ၇ာ၇အောင်လုပ်ကြည့်၇ပါ့မလားအကို။ ၇၇င်ပြောပြပြီးကျေးဇုးပြူပြီးတင်ပြပေးပါ့လားဗျာ
။ကျွန်တော်အကိုဝှပ်ဆိုတ်ကိုကြည့်ပြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မသိသေးတဲ့လြုတွေကိုနားလယ်အောင်၇ှင်းပြတဲ့အတွက်တကယ်ကျေးဇူးပါအကို။ sony ericsson w705 ဖုန်းကို၇အောင်၇ှင်းပြပေးပါနော်။မျော်လင့်ခြင်းများစ္စာနဲ့စောင့်နေမယ်နော်အကို
Anonymous March 14, 2012 at 5:41 PM
Anonymous March 18, 2012 at 5:25 AM
အရမ်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် အစ်ကို ခုမှဘဲ လုပ်တတ်သွားပီ....
0906092945 March 22, 2012 at 2:30 PM
ကျွန်ုတော်မှရတယ်samsung galaxy mini မှရတယ်
လရောင် March 24, 2012 at 2:55 PM
ဒီနည်းက samsung မှာပဲရတာပါ ပြီး မြန်မာဖောင့်သုံးတာ internet ကတော့အဆင်ပြေပါတယ်၊ sms ပို့ရင် samsung အချင်းချင်းပဲရတယ်၊တခြားဖုန်းတွေနဲ့ဆိုမရဘူး အကောင်းဆုံးက root ချပြီးသွင်းပါ၊ samsung တော်တော်များများက Z4 root နဲ့ရပါတယ်။
kyawminmin March 26, 2012 at 6:34 PM
kyawminmin March 26, 2012 at 6:44 PM
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုနေမင်းမောင် ဆရာပြတဲ့နည်းနဲ့ကျနော့်samsunggalaxy gioကနေဒီစာကိုရေးပါတယ် သူငယ်ချင်းရဲ့ galaxy sကိုလည်းကျနော်မြန်မာစာသွင်းပေးလိုက်ပ့ပြီး အချိန်ရရင်
Anonymous March 28, 2012 at 5:56 PM
Samsung Mobiles has Fonts Pack changer automatically installed on firmwares. HTC and Others doesn't have Fonts changer Packages is not Originally Install. If u want to
Install Other Fonts pack u will be need to Root. Root is dangerous and If u don't have
Knowledge about ROOT METHOD. U don't test it. There are many root method. not all are same. Many Company,Many Method. If u want to istall fonts. 1. Root 2.Busy box install 3.Fonts changer Install ( Fonts Changer Need BusyBox ) That is important. 4.U will replace with system fonts with u r fonts. That is not very Simple Method But Nothing is willing our mind. We are Human.
ကျော်မျိုးဟိန်း April 5, 2012 at 2:41 AM
Wish u all the best ,,,
koko April 16, 2012 at 1:23 PM
အကိုရေ မ၇ဘူး ဖုန်ထဲထည့်ကြည်တယ်မရဘူး install လုပ်မရဘူး ဖိုင်တွေက empty ဖြစ်နေတယ် ကျော်ခွနည်းလေးရှိရင်ပေးပါလား
heavenlove April 23, 2012 at 10:48 AM
ကျေးဇူးအကို နောက်လဲ တခြားဟာလေးတွေတင်ပေးပါအုံးနော်
ဟိန်းထက် April 24, 2012 at 2:12 PM
ကျွန်တော့်ဖုန်းမှာတော့ရတယ် samsung galaxy
ဟိန်းထက် April 24, 2012 at 2:15 PM
အကိုရေ root လုပ်တာလေးရှင်းပြပါအုံး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
hu sc April 25, 2012 at 10:57 AM
ye khaung May 9, 2012 at 9:59 PM
ye khaung May 9, 2012 at 10:01 PM
khaiminn May 12, 2012 at 7:32 PM
အစ်ကိုရေ..ကျွန်တော့်ဖုန်းက Samsung Glaxy Appollo ပါ...ကျွန်တော် ဖောင့်ကိုလည်း install လုပ်ပြီးပြီ...ဒါပေမယ့် မြန်မာလို မပေါ်ဘူးဖြစ်နေတယ်...ကျွန်တော့်ဖုန်းမှာက Sound and Display ဆိုတာ တွဲပြီးပါတယ်...ဒါပေမယ့် Screen Display မှာ အစ်ကို ဖော်ပြထားသလို Font Style ဆိုတာမပေါ်ဘူး..
လိုက်ရှာလို့လည်း မရဘူးဖြစ်နေလို့....မြန်မာလို ရိုက်လို့ရတယ်အစ်ကို...ကြည့်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်....အဲဒါ ကူညီပါဦးဗျာ....
SHWETHWAY May 15, 2012 at 10:31 AM
Samsung Glaxy Ace မှာ 25000 WCDMA မှာ internet ဘယ်လိုသုံးရလဲသိချင်လို့ပါ။ internet လျှောက်ထားတပတ်လောက်ရှိပြီ ရမရ ဘယ်လို့ စမ်းရလဲ မသိလိုပါ။
Anonymous May 15, 2012 at 11:39 PM
ကိုနေ ကျနော့် Samsung Galaxy Note မှာ Gtalk အကောင်းနောက်တစ်ခု ချိန်းသုံးချင်လို့ 
မရဘူးဖစ်နေတယ် Sing Out လုပ်လည်း ပြန်ဝင်လိုက်ရင် တန်းပွင့်သွားတာဘဲ နောက်တစ်ခုချိန်းသုံးချင်တာ
အဆင်မပြေဘူးဖစ်နေတယ် ...Privacy >>> Factory data restart ချလိုက်ရင်တော့ ပြန်ဖွင့်လို့ ရတာပေါ့နော် ....အလိုအလုပ်ချင်ဘူး ပြန်ပြန်ဒေါင်းနေရလို့..
Account and sync မှာ Add တွေရော Remove တွေရော စမ်းပြီးပြီ ဘယ်လိုမှမရတာနဲ့..
ကိုနေ ကိုအကူအညီတောင်းရတော့ မယ် ...Restart တော့မချချင်ဘူး..ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာကို
အပန်းမကြီးဘူးဆိုရင် miniman9999@gmail.com ကိုမေးပို့ ပြီးတော့ ရှင်းပြပေးစေချင်ပါတယ် ..
ye khaung May 19, 2012 at 2:54 PM
အပန်းမကြီးဘူးဆိုရင် khaung.ye@gmail.com ကိုမေးပို့ ပြီးတော့ ရှင်းပြပေးစေချင်ပါတယ် ..
khaiminn May 27, 2012 at 9:38 PM
လိုက်ရှာလို့လည်း မရဘူးဖြစ်နေလို့....မြန်မာလို ရိုက်လို့ရတယ်အစ်ကို...ကြည့်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်....ဘယ်လို
လုပ်ရမလဲဆိုတာကို ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ myatnothukokott1@gmail.com ကို မေးလ်ပို့ပြီး ရှင်းပြပေးပါလား..
ကိုနေ့ရဲ့ မေးလ်ကို စောင့်နေမယ်နော်...ခင်မင်လေးစားလျှက်
Now June 12, 2012 at 12:03 PM
ဆမ်ဆောင်း အင်န်ဖြုစ် (Samsung Infuse 4G) ထည့်လို့လဲ အဆင်ပြေကြောင်း တွေ့ရပါတယ်။
http.//Marine Science.blogspot.com July 1, 2012 at 11:16 AM
sumsung wave3မှာ မြန်မာဖောင့် ဘယ်လိုသွင်းလဲဆိုတာပြောပြပေးပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
nokia c6 01 စာဖတ်လို့ရရုံပဲလုပ်လို့ရတယ်စာရိုက်လို့ချက်တင်တက်လို့ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲကူညီပါနော် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ထွန်းဝင်း July 19, 2012 at 8:56 PM
galaxy youth မှာလည်းအဆင်ပြေပါတယ် သူငယ်ချင်းဖုန်းကိုလုတ်ပေးလိုက်တာပါ ကျေးဇူးတင်စွာဖြင့်
nay thar July 29, 2012 at 2:06 AM
pandablogger July 31, 2012 at 7:08 PM
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..ကျွန်တော့ samsung glaxy ace plus မှာလည်းရသွားပြီး။thz....
soe minn khaing August 20, 2012 at 5:09 PM
အစ်ကိုရေ ကျွန်တော်လည်း စမ်းကြည့်တာ အဆင်ပြေတယ်။ samsung glaxy mini ပါ။ ဒါပေမယ့် phone massage ပို့တာ တခြား သူဆီမှာ မြန်မာလိုမပေါ်ဘူး။ ကိုယ့်ဆီကို ပို့ရင်ရင် မပေါ်ဘူး။ အင်တာနက်သုံးတာတော့ အရမ်းကို အဆင်ပြေပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
Pyaythar August 23, 2012 at 6:40 PM
maythawda August 24, 2012 at 1:00 PM
Anonymous September 11, 2012 at 9:35 PM
thanksalot bro,.now i can type myanmar font in my galasy s2..
Anonymous September 19, 2012 at 12:32 AM
အစ်ကိုရေ ကျွန်တော်ကို HUAWEI U8818 ROOT လုပ်နည်းကိုဓါတ်ပုံနဲ.တင်ပေးပါလား..ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်
Anonymous November 13, 2012 at 3:21 PM
Min aung tun December 14, 2012 at 7:05 PM
Min aung tun December 14, 2012 at 7:10 PM
htun hlaing January 11, 2013 at 2:26 PM
ကျွန်တော်ကတော့ Thank ဆိုတာနဲ့အားမရဘူး very very much ကိုပါထပ်ထည့်လိုက်မယ်ဗျို့
htun hlaing January 11, 2013 at 2:27 PM
Nyi Thawe February 11, 2013 at 7:56 PM
မုန်းချစ်သူ February 12, 2013 at 5:21 AM
အကိုရေ...အနော့ဖုန်းက s2ပါ.... အကိုပြောသလိုဖောင့်သွင်းတာအဆင်ပြေပါတယ်...sms မှာ မြန်မာလိုပေါ်ပေမယ့် Facebook နဲ့ browser တွေမှာ မြန်မာလိုမပေါ်ဘူးဖြစ်နေတယ်အကို.... အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာ ကျေးဇူးပြူပြီးဖြေပေးစေလိုပါတယ်... Browser settings ထဲဝင်ပြီး ဖောင့်ချိန်းဖို့ရှာကြည့်ပါသေးတယ်...advance မှာ text encoding ဆိူတာဘဲတွေ့တယ်ဗျ...အဲ့မှာ Unicode (UTF-8) ဆိုတာတွေ့လို့ပြောင်းတာလည်း မြန်မာလိုမရဘူးဖြစ်နေတယ်....FBက ချက်မှာတော့ မြန်မာလိုချက်လို့ရတယ်...ဒါပေမယ့် New Feed မှာတော့ မြန်မာလိုမပေါ်ဘူးဖြစ်နေတယ်...ဒါကြောင့် ကျေးဇူးပြူပြီး အကြောင်းပြန်စေချင်ပါတယ်..
ရွှေတိုး March 10, 2013 at 8:04 PM
Aung Thura June 24, 2013 at 9:18 PM
ကျနော့ iphone 5မှာရောမရဘူးလားဟင်
Only for You July 9, 2013 at 11:47 AM
HTC onev & HTC butterfly မှာဘယ်လိုသွင်းရမလဲသိချင်လို့ပါ ကူညီပြီးဖြေပေးကြပါအုံးနော် root ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ကောပြောပေးပါနော် fount style မပါတော့ဘယ်လိုချိန်းရမှန်းမသိလို့ပါ
sawjhon July 21, 2013 at 10:05 AM
ကိုနေမင်းမောင်ရေ မြန်မာဖောင့်လင့်တွေသေနေလို့ ပြန်တင်ပေးလို့ရရင်
ပြန်တင်ပေးပါအုံး ကျွန်တော့်ဖုန်းမှာ မြန်မာဖောင့်မရှိလို့ပါ
Anonymous October 5, 2014 at 2:17 PM
Anonymous December 4, 2015 at 12:56 PM